ရွှေဝန်းရတနာ: ဘဝအမောတွေပြေစေဘို့ အားလုံးဘဲရီ(ရည်)မောကြပါစို့
-ဘူတာသွားချင်လို့ ကားခ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။
-သုံးရာပါခင်ဗျာ။ အိပ်အတွက်က မယူပါဘူး။
- ဒါဖြင့် အိတ်ကိုပဲ ဘူတာပို့ပေးပါကွာ ငါလမ်းလျှောက် လိုက်ခံမယ်။
- ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်သွားရင် မြေပြင်ကိုတွေ့နိုင်မလဲ။
- ဘယ်လမ်းက သွားရမှာလဲ။
- အောက်တည့်တည့် ဆင်းသွားရမှာ။
ရှက်တတ်ဟန်ရှိသော မိန်းမပျိုလေးအား သကြားလုံး ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးက သူ့စက်ရုံတွင် သကြားလုံးကလေးများကို ကြော်ငြာသည့် အနေ ဖြင့် လမ်းသွားလမ်းလာ များအား လိုက်လံ ဝေငှ
ပေးရန် ငှားရမ်းထားသည်။ ပထမဆုံး အလုပ်စ လုပ်သည့်နေ့ အလုပ်သိမ်းချိန်မှာ ထိုမိန်းမပျိုလေး သည် သူ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နှင့် အမှတ်မထင် တွေ့ဆုံ လိုက်ရ၏။
ဟဲ့ နင်မကြာ ခင်လက်ထပ် တော့မလို့ ဆို…….
ဟုတ်တယ်ဟ…… ရှေ့လထဲမှာ လက်ထပ်မယ်..
၀မ်းသာစရာပဲဟာ။ ဒါထက် ခုလောလော ဆယ် နင်ဘာလုပ်နေလဲ
ကောလိပ်ကျောင်းသူတစ်ဦးက သူ့ချစ်သူအား မှာနေ၏။
ကနေ့ညကတော့ မောင်လာလို့ မဖြစ်ဘူးနော်၊ ဖေဖေ သိပ်စိတ်ဆိုးနေတယ်သိလား။ မနေ့ညက သူ့ကား ယူပြီး မ တို့ လျှောက်မောင်းကြတာကို သိသွားတယ်လေ။
ဟာ…….. ဘယ်လိုလုပ်သိသွားတာလဲ၊ ဒုက္ခပါပဲကွာ…..
ဟောတော့… မောင်မေ့သွားပြီလား၊ မတို့ ဖေဖေ့ ကို ၀င်တိုက်မိကြတယ် လေ။
လူငယ် – ဦးသမီးနဲ့ ကျွန်တော် ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပါပြီ၊ ကျွန်တော် သူ့ကို လက်ထပ်ချင်ပါတယ်။
ဖခင် – မင်းအရက်သောက်တတ်လား
လူငယ် – ဟာ……. ဦး၊ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ အရင်ပြောပါဦး၊ ပြီးမှ သောက်ကြတာပေါ့
ကောင်လေး – ကျွန်တော် ဦးသမီးကို လက်ထပ်ချင်ပါတယ်
မိန်းကလေးဖခင် – မင်း၊ ငါ့မိန်းမ နဲ့ တွေ့ပြီး ပြီလား
ကောင်လေး – ဟုတ်ကဲ့၊ တွေ့ပြီး ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဦးသမီးကိုပဲ ကျွန်တော် ပိုကြိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် က ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပါ..
ငရဲပြည်ကို လူသုံးယောက် သေဆုံးပြီးရောက်လာပါတယ်…..
ငရဲမင်းကြီး က သေလူသုံးယောက်အားသေဆုံးခြင်းအကြောင်း အရာတွေကို မေးမြန်းနေပါတယ်…
ပထမလူ။ ကျွန်တော့် မိန်းမဖောက်ပြန်တာကိုအလုပ်ကအပြန်မှာတွေပြီး မိန်းမနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ သူကို ရေခဲသေတ္တာ နဲ့ ပစ်ပေါက်ပြီး ကျွန်တော် ကိုယ်ဘာသာ သတ်သေလာတာပါ…
ငရဲမင်းကြီး က ဒုတိယလူဘက်သိုလှည့်မေးပါတယ်…
ငရဲမင်းကြီး။ မင်းကရော ဘာလို့သေတာလဲ
ဒုတိယလူ။ ကျွန်တော် က ကျွန်တော့် အိမ်ရှေ့ ၀ရန်တာမှာ အရမ်း အိုက်လို့ အကျီင်္တွေ ချွတ်ပြီး အအေးခဲံနေတုံး အပေါ်က ရေခဲသေတ္တာပြုတ်ကျတာ ပိပြီး သေလာတာပါ….
တတိယလူ။ ကျွန်တော် က ရေခဲသေတ္တာထဲ က လူပါဗျာ……
တခါသောလူတစ်ဦးသည် သတ်မှတ်မြန်နှုန်းထက်ကျော်လွန်စွာမောင်းသဖြင့် ရဲသားတစ်ဦးမှဖမ်းလေ၏..
ရဲသား – ” ခင်ဗျားရဲ့လိုင်စင်ခဏပြပါ..”
ယာဉ်မောင်း – “ခင်ဗျားကျွန်တော်အနားမကပ်နဲ့.. ကျုပ်အခုမှလူသတ်ပြီးလာတာ..ကျုပ်ဆီမှာသေနတ်ရှိတယ်.. ကားနောက်ခန်းထဲမှာလူသတ်ပြီးထည့်လာတာ..ဟားဟား”
ရဲသားလည်းစခန်းသို့အကြောင်းကြားရာ ရဲအရာရှိအပါအ၀င် တပ်ဖွဲ့များရောက်ရှိလာလေသည်… ကားကိုအတန်ကြာစစ်ဆေးသော်လည်းမည့်သည့်လက်နက်၊ အလောင်းမျှမတွေ့ရသောအခါ..
ရဲအရာရှိ – “ရဲအရာရှိ.. တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ… ကျွန်တော့်တပ်သားကမှားသွားတာပါ.. ”
ယာဉ်မောင်း – “ဟာ.. ဒီကောင်လား.. ကျွန်တော်ကိုလည်း Speeding ဆိုပြီးတားထားသေးတယ်”
ဆရာ – တစ်ခါတစ်လေ အရူးတစ်ယောက်မေးတဲ့မေးခွန်းကို လူကောင်းတွေမဖြေနိုင်တာမျိုးရှိ
ကျောင်းသား – အင်းဒါကြောင့် ဒီလကျနော် စာမေးပွဲကျတာကိုး။ သိပြီ သိပြီ
လူနှစ်ယောက်သေလွန်ပြီးနောက် တမလွန်သို့ရောက်လာကြသည်။ တစ်ယောက်ကစမေးသည်။
“မင်းဘာလို့သေသွားတာလဲ။” နောက်တစ်ယောက်က ” အအေးလွန်လို့ သွေးခဲသေတာကွ”
ပထမလူက “ဒီလိုကွ။ ငါရုံးကပြန်လာတယ်ကွာ။ ငါ့တိုက်ခန်းရှေ့ရောက်တော့ အထဲမှာ ငါ့မိန်းမနဲ့
တခြားလူတစ်ယောက် စကားပြောသံကြားရတယ်။ အဲဒါနဲ့ငါလဲ တံခါးကို တအားခေါက်တယ်။ တော်
တော်နဲ့မပွင့်ဘူးကွ။ တော်တော်ကြာမှ ငါ့မိန်းမတံခါးလာဖွင့်တယ်။ ဒါနဲ့ အခန်းထဲကြည့်လိုက်တော့
သူတစ်ယောက်ထဲကွ။ ငါလဲတစ်ခန်းလုံးမွှေ့ပတ်ရှာတယ်။ မတွေ့ဘူးဟေ့ကောင်ရေ။ ငါ့တိုက်ခန်းကလဲ ငါးထပ်မှာကွ။ ဘယ်လိုမှ အောက်ကိုခုန်ချလို့လဲမရဘူး။ ခုန်ချရင်သေမှာပဲ။ မတွေ့တဲ့ အဆုံး ငါလဲ အံ့သြလွန်ပြီး နှလုံးသွေးရပ်ပြီးသေတာပါပဲကွာ။ ”
ထိုအခါ နောက်တစ်ယောက်က ” တောက်..မင်းတော်တော်ညံ့တဲ့ကောင်ပဲကွာ။ ဘာလို့ရေခဲသေတ္တာ
ကိုဖွင့်မကြည့်ရတာတုန်း။ ဖွင့်သာကြည့်ရင် ငါတို့နှစ်ယောက်လုံး အသက်ရှင်မှာ။ ခုတော့ကွာ အသေစောလို့ နှမျောလှချည်ရဲ့” ။
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးအတွက် ကော်လီနာရဲ့ အနီကတ်
Real Madrid က
အိမ်က မိန်းမ စိန်နားကပ်ထိန်းသိမ်းရေးလောက်မှ စိတ်မ၀င်စားတဲ့
Posted by shwewunyatana at 10:17 PM
jasmine(တောင်ကြီး) September 26, 2011 at 6:04 AM
တော်ကြာ jasmine ခြေထောက်ကိုပါလိုချင်တ်ာဆိုရင်တော့ဒုက္ခ
သမီးစံ September 27, 2011 at 5:34 AM
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်တန့်ရန် မလေးရှားရောက် မြန်မာ့အေ...
မြန်မာပြည်မှာဒေါ်လာ ဝယ်ယူမှု များလာသောကြောင့် ဈေးတက...